Saliida jumlada ah ee ugufiican Rotundus warshad saliida lagama maarmaanka ah iyo soosaarayaasha | HaiRui
Saliida jumlada ah 'Rotundus saliid lagama maarmaanka' jumlada ah
geedo kedar ah
saliid lagama maarmaan ah rotundus
Brown dareere qaro weyn
Furuud Jaale bunni ah
Muunado La Keenay
1.25kg Fiber Drums leh bacaha balaastigga ah ee gudaha ku jira 2. Durbaannada GI ee 50kg / 180kg net.3. Sida looga baahan yahay macaamiisha.
1.25kg Fiber Drums leh bacaha balaastigga ah ee gudaha ku jira
2. Durbaannada GI oo ah 50kg / 180kg net.
3. Sida macaamiisha looga baahan yahay.
48saacadood oo muunad ah / 7 maalmood oo ka dhan ah dhigaalka wax soo saarka dufcadda
Magaca sheyga: Saliida 'Cyperus Oil' ee saliida lagama maarmaanka ah ee loo yaqaan 'rotundus saliid muhiim ah ee laga soosaaray Dhirta
-Cyperus Rotundus Linn Saliid qaro weyn leh oo leh cawlan dareere bunni ah, ur ubax leh
-Cyperus Rotundus Linn Oil content: cyperus rotundus L.en, khamriga cyperus rotundus, iyo cyperone kale
-Cyperus Rotundus Linn Oil waxaa loo isticmaalay saabuun, cadarro, is qurxin, udgoon, cunno iyo dhadhan khamri, gaas caafimaad ahaan xaq u leh, iyo caadada, saamaynta xanuunka.
-Cyperus Rotundus Linn Oil oo loo adeegsaday daaweynta xanuunada caloosha
-Cyperus Rotundus Linn Oil. Waxay kobcisaa niyadda oo ka takhalustaa niyad jabka, waxay xakameysaa caadada, waxay kobcisaa wareegga dhiigga, waxay u gudbisaa hidda-wadaha beerka dooliga.
Alaabtayada ugu weyn:
Saliid sinjibiil, saliid dhego yare, saliid toon ah, saliid anisi, saliid liin dhanaan, saliid iniin flax ah, saliid yicib macaan, saliida jeermiska qamadiga, saliida cawda, Borage oil, Patchouli oil, Lavender oil, Eucalyptus oil, qorfe oil, Perilla oil, Reishi saliida kudka, saliida Chili, Saliida Myrrh, saliida geedka shaaha, saliida sandalwood, saliida Oregano, Carvacrol, Spearmint Oil, Ursolic Acid, Borneol, Aloe vera oilandGinseng oiland iwm.
2sano goorta la kaydiyo
Brand Brand iyo Logo: La Heli Karo
Qaacido cusub oo saameyn gaar ah leh
Xirmo 1.Kamaysan, mug, astaan
Amarada 2.OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa.
3.Waxaan kuusoo bandhigi karnaa magacyadeenna qiimaha tartanka.
Markaad amarka noo dhigto, alaabteenu waxay la socon doonaan amarkaaga waana ku ogeysiin doonaa
Nidaamka ugu cusub ilaa aad hesho. Waan ka badnaan doonnaa
ku faraxsanahay inaan jawaab kaa siiyo 24 saac gudahood.
Jiang Xi Hai Rui Dhirta Dabiiciga ah Co., Ltd.
Shirkaddayadu waxay ku takhasustay soo saarista, farsamaynta iyo iibinta dhirta dabiiciga ah saliidaha lagama maarmaanka ah, taas oo ku guuleysatay shahaadooyinka MSDS iyo COA. Waqtiga oo dhan wali waxaan u hoggaansameynaa kooban ee "badbaado leh tayo sare leh, horumarin lagu kalsoonaan karo"
Warshaddeenu waxay daboolaysaa 26000 mitir murabac, waxay maalgelinaysaa sanduuqa 18 milyan, oo leh qalabka tijaabinta dusha sare iyo tas-hiilaadka tijaabada ee kala duwan.
Waxaa intaa dheer, annagu kama naqaanno wax ka mid ah wax soo saarkeenna xoolaha; waxaan nahay 100% khudaar. & shirkadda dabeecadda jecel. Markaa inaad na doorataa waa go'aankaaga Xasaasiga ah.
1. S: Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi? Aaway warshadaadu?
J: Waxaan nahay warshad wax soo saar oo loogu talagalay daryeelka maqaarka iyo maaskaro OEM / ODM, waxaan ku hawlanay wax soo saarka qurxinta ilaa sanadkii 2006. Warshaddeena waxay ku taalaa Jiangxiprovince, xarunta wax soo saarka saliida ee Shiinaha.
2.Q: Maxay shirkaddaadu u qaban kartaa macaamiishaada?
J: Waxaan sameyn karnaa cilmi baaris, sameynta naqshadeynta macaamil kasta oo macquul ah ama shuruudaha, waxaan sameyn karnaa wax soo saar, baaritaanka is qurxinta, iskuduwaha shixnadaha macaamiisheena.
3.Q: Sideen ganacsi ugu bilaabi karnaa shirkaddaada?
J: Kaliya laxariir mid kamid ah maamulayaashayada, wax walbo waan kuu qabaneynaa laga bilaabo ugu fiican ilaa rar. Waxaan ku soo saari karnaa waxyaabaha la isku qurxiyo iyadoo lagu saleynayo shuruudaha qallafsan ee macmiilka, shaybaarka, ama sameynta.
4, maxaan u dooran karnaa alaabada shirkadaada?
Sababtoo ah shirkadeena qiima jaban iyadoo tayo ahaan aad ufiican, waxay leedahay koox iib ah oo xirfadlayaal iyo masuuliyad badan leh, waxaan soo dhaweynay oo aan ku amaanay macaamiisheenna, waana sii wadaynaa inaan siino adeega daacadda ah, tayada ugu fiican iyo qiimaha ugu jaban, si aan kula shaqeyno horumar mustaqbalka iyo barwaaqo. Waan hubaa in shirkadeena ay tahay xulashadaada macquul ah!
C waa Fasalka Cadar, waxaan u isticmaali karnaa dhadhanka & udugga, quruxda iyo daryeelka maqaarka.
Basil Saliid Muhiim ah
Patchouli Saliida Muhiimka ah
Thyme Oil Muhiimka ah
Label Gaarka ah Top 6 Saliidaha udgoon saafi ah Esse ...
Organic Virgin Morocco Cometic Timaha Daryeelka timaha saliida
Tayo sare leh L-menthol dabiici ah oo leh qiimo jumlo ah
Saafi ah OEM Daryeelka Timaha Saliida Argan
OEM / ODM dardaro / dabiici ah borneol flake / Bor ...
Warshad Sicirka Sicirka Ubadka Cunto Dajinta ...